Zvakajairika Zvikonzero zvekuwana Dhatabhesi Uori
Outlook Express Usadzima
musha > Products > DataNumen Access Repair > Zvakajairika Zvikonzero zvekuwana Hwori
Zvakajairika Zvikonzero Gadzira Microsoft Access Dhatabhesi Yakashata kana Yakakuvara
Pane zvikonzero zvakawanda zvinokonzeresa kuti yako Access MDB faira yakashatiswa kana kukuvara. Isu tinovaisa mumapoka maviri, kureva, zvikonzero zvehardware uye zvikonzero zve software.
Chero nguva yako Hardware painokundikana mukuchengetedza kana kuendesa iyo data yeako Access dhatabhesi, dhatabhesi dzinogona kukanganiswa. Kune anonyanya marudzi matatu:
Data Kuchengeta Midziyo Kukundikana. Semuenzaniso, kana rako rakaoma dhisiki riine mamwe mativi akashata uye yako Yekuwana MDB faira inochengetwa pane izvi zvikamu. Ipapo iwe unogona kuverenga chete chikamu cheiyo MDB faira. Kana iyo data yaunoverenga haina kunaka uye izere nezvikanganiso.
Yakashata Networking Chishandiso. Semuenzaniso, iyo Dhatabhesi dhatabhesi inogara pane server, uye iwe unoyedza kuiwana kubva kune mutengi komputa, kuburikidza netiweki zvinongedzo. Kana network network kadhi, cables, ma routers, hubs uye chero mamwe madhivhaini anoita maratidziro enetwork ane matambudziko, ipapo kure kuwana kwe MDB dhatabhesi kunogona kuishatisa.
Simba Kukundikana. Kana kukundikana kwesimba kuchiitika kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiwana iyo MDB dhatabhesi, izvo zvinogona kusiya ako MDB mafaira akanganisa
Kune akawanda matekinoroji ekudzivirira kana kudzikisira Access dhatabhesi huori nekuda kwematambudziko ehurdware, semuenzaniso, UPS inogona kudzikisira magetsi kukundikana matambudziko, uye kushandisa zvakavimbika zvigadzirwa zvemidziyo zvinogona zvakare kudzikisira mikana yehuori hwe data.
Zvakare kuwanda kwekuwana dhatabhesi huori hunoitika nekuda kwesoftware zvine chekuita nenyaya.
Iyo isiriyo File System Kudzoreredza. Iwe unogona kuona zvisingatendeseke kuti faira sisitimu yekudzosa inogona kukonzera Kuwana dhatabhesi huori. Asi zvirizvo, dzimwe nguva kana yako faira system yaputswa, uye iwe uchiedza kuhaya dhata yekudzosa chishandiso kana nyanzvi kudzoreredza MDB mairi pairi, mafaera akadzorerwa anogona kunge achine huori, nekuti:
Nekuda kweiyo faira system njodzi, zvimwe zvikamu zveiyo yekutanga MDB dhatabhesi faira iri lost zvachose, kana kunyorwa nemarara marara, izvo zvinoita iyo yekupedzisira yakanunurwa MDB faira isina kukwana kana iine zvisirizvo data.
Chishandiso chekudzoreredza kana nyanzvi haina hunyanzvi hwakakwana iyo / yaakatora imwe data yemarara uye yoichengeta sefaira ine .MDB yekuwedzera. Sezvo izvi zvinonzi .MDB mafaera asina chero dhata inoshanda yeAccess dhatabhesi, haina basa zvachose.
Chishandiso chekudzoreredza kana nyanzvi yaunganidza akaganhurirwa dhata eiyo MDB faira, asi haina kuasanganisa nenzira kwayo, izvo zvakare zvinoita kuti iyo yekupedzisira yakanunurwa MDB faira isashande.
Naizvozvo, kana pakaitika njodzi sisitimu yefaira, iwe unofanirwa kutsvaga yakanaka yekudzoreredza chishandiso / nyanzvi yekudzosera yako MDB dhatabhesi mafaera. Chishandiso chakashata / nyanzvi ichaita kuti mamiriro acho anyanye panzvimbo pekuti ave nani.
Virus kana Imwe Yakashata Software. Mazhinji mavhairasi, akadai seTrojan.Win32.Cryzip.a, inozokanganisa nekukuvadza iyo Yekuwana MDB mafaera kana kuita kuti vasasvikike. Inokurudzirwa kwazvo kuisa mhando anti-virus software kune yako database system.
Nyora mashandiro Abort. Mune zvakajairwa mamiriro, iwe unofanirwa kusiya Access zvine mutsindo nekuchengetedza ese ako shanduko pane MDB dhatabhesi uye nekudzvanya "Buda" kana "Vhara" menyu chinhu. Nekudaro, kana Kupinda kukavharwa zvisina kujairika kana iwe uchivhura uye uchinyorera kune MDB dhatabhesi, ipapo iyo Jet dhatabhesi injini inogona kumaka dhatabhesi seyokufungidzira kana yakashatiswa. Izvi zvinogona kuitika kana kukundikana kwesimba kwataurwa pamusoro kuchinge kwaitika, kana kana iwe ukasiya iyo Bhatani nekudzvanya "End Task" muWindows Task Manager, kana kana iwe ukadzima komputa pasina kusiya Access uye Windows zvakajairika.
Zviratidzo zveChuori Chekuwana Dhatabhesi:
Nezve kwako chirevo, isu takaunganidza rondedzero yezvikanganiso kana uchinge wawana yakashata MDB faira.
Gadzirisa Corrupt Access Databases:
Iwe unogona kushandisa yedu yekuhwina-kuhwina chigadzirwa DataNumen Access Repair to dzosera yako yakaora Yekuwana dhatabhesi.
Uori Microsoft Access MDBs MIBVUNZO